The University of Adelaide - Kudzidza muAustralia, kuva International
inotangwa : 1874
Musakanganwa kuti kurukura The University of Adelaide
Kunyoresa nenguva The University of Adelaide
The University of Adelaide ari munyika-kirasi tertiary dzidzo uye kutsvakurudza sangano rakazvipira achiendesa yepamusoro uye kudzidza akasiyana, kudzidzisa uye tsvakurudzo zvakaitika.
The University of Adelaide hwokungotsvaka:
kuziva ruzivo rutsva
Pakugadzirira vatungamiriri yakadzidza mangwana vari akazvimirira, nevafungi okusika ane dzakawanda maonero.
The University of Adelaide zvaunoswedera simba kubva raro dzakavamba tsika sezvo achizadzisa yayo yemberi tsvakurudzo uye kudzidzisa zvinangwa.
The University ndiyo yemarudzi urongwa kuti Unongova kunosanganisira yakanaka pakutsvakurudza wepayunivhesiti, apo kufara, simba uye chido ari kutsvaka zivo itsva ndeimwe umo vadzidzi vose chinhano; sechinhu chinoziva uye kushivirira munharaunda umo vanokwanisa vadzidzi vanogona kuwana rutsigiro, chero vaimbova kana mamiriro; uye sezvo nzvimbo umo Kaurna vanhu, zvaichengeta yepakutanga venyika pamusoro iyo zvino pazvikoro zororo, vari kubvuma uye netsika yavo kuremekedzwa.
The University of Adelaide zvakasiyana zviri
A muviri democratic nohupamhi mudzidzi
Vashandi dzakawanda mutsauko
A mweya rusununguko kuongorora minda itsva
Pfungwa kukosha munharaunda
A chinangwa kugadzirira vatungamiriri vakadzidza.
The University of Adelaide anoita kuti nevamwe kusvika kuti recaptures yakanaka pamusoro tsvakurudzo wepayunivhesiti, uye anotsvaka munhu pose-chakabatikana tsvimbo uye bvumidza, mberi mudzidzi Mix, izvo zvichavagadzirira vadzidzi kuti pose mugari kuwedzera borderless nyika. Richava yunivhesiti wechokwadi ayo nhoroondo midzi, asi kwazvo vakazvipira basa rayo pakuburitsa kudzidza akagadzirirwa kuridza kutungamirira zvikamu zviri Asian Century.
Kudzidza nokudzidzisa unosanganisira wakafara siyana Rokutenderwa uye dhigirii madhigirii zvaipiwa paUniversity.
Vadzidzi Anopiwa yakasiyana RUBATSIRO RUNOTARISA dzidzo ruzivo uye akapedza kudzidza hunhu zvichienderana kuti basa zvaitika. madhigirii edu zvahunoreva changing zvinodiwa vashandirwi uye zvinodiwa bhizimisi uye munzanga.
Center nokuti Aboriginal Studies muna Music (CASM)
Gender Studies uye Social Analysis
jogirafi, Environment uye Population
zvematongerwo enyika & International Studies
Rorusununguko Engineering, kombiyuta & kwemasvomhu Sciences
Center nokuti Automotive Safety Research (CASR)
School of kwemasvomhu Sciences
Chenjera Care Medicine
Anatomy uye zvokurwara
Ophthalmology & Kutarisana Sciences
Orthopedics & kuvhunduka kwakanyanya
Center nokuti Kunetseka Studies
Joanna naVaBriggs Institute
Mano ounyanzvi hwokugadzira
Entrepreneurship, Marketing & utsanzi Center (ECIC)
School of Agriculture, chikafu & waini
The University of Adelaide kwakatangwa 6 Mbudzi 1874 pashure £ 20,000 mari kubudikidza grazier uye mhangura mucheri Walter Watson Hughes, pamwe rutsigiro uye mipiro Thomas Elder.
Yokutanga chanzera akanga Sir Richard Hanson uye wokutanga mutevedzeri chanzera raiva Dr Augustus Short. Yokutanga dhigirii akapa aiva Bachelor of Arts uye yunivhesiti vakatanga achidzidzisa March 1876. John Davidson aiva Hughes purofesa Chirungu mabhuku uye uzivi mupfungwa uye tsika yokutanga.
The University ine nhoroondo refu champions kodzero dzevakadzi nedzidzo yepamusorosoro. Rakanga wechipiri University iri vaitaura Chirungu (mushure University of London, 1878) kubvuma vakadzi yakaenzana mashoko nevarume (1881), kunyange vakadzi vakadzidza pamwe nevarume kubva mukutanga makirasi 1876, uye vakanga zvakafanana kuzoshanda zvose zvedzidzo mibayiro uye chinokudza. Its hadzi girajuweta wokutanga aiva Edith Emily Dornwell, uyo aivawo munhu wokutanga muna Australia kugamuchira mwero Bachelor of Science (BSc., 1885). The yunivhesiti zvakare kudzidza Australia yokutanga hadzi chiremba Laura Fowler (MB, 1891). Ruby Davy (B. Mus., 1907; D. Mus., 1918) ndiye wokutanga mukadzi Australian kugamuchira doctorate nziyo. The University aivawo wokutanga vasanangurwa mukadzi ane University Council muna Australia, Helen Mayo (Nbrbsh, 1902).
The Imba guru University, Bonython Hall, yakavakwa 1936 anotevera mari kubva muridzi The Advertiser pepanhau, Sir John Langdon Bonython, uyo akasiya £ 40.000 kuti Great Hall nokuda University.
University kudzidza zvinosanganisira vanhu vakakurumbira vakaita zvinokosha mipiro minda yavo munyika nepasi rese, uye vanosanganisira Howard Florey, Lawrence Bragg,Mark Oliphant uye Hugh Cairns.
Unoda kurukura The University of Adelaide ? chero mubvunzo, Mashoko kana wongororo
The University of Adelaide musi Map
Photos: The University of Adelaide pamutemo Facebook
The University of Adelaide wongororo
Join kukurukura pamusoro The University of Adelaide.